सबै दलहरु एक भएर विकासमा लाग्नसके बाह्य शक्तिको केही लाग्दैन : संयोजक भट्टराई | नयाँ शक्ति नेपाल
सबै दलहरु एक भएर विकासमा लाग्नसके बाह्य शक्तिको केही लाग्दैन : संयोजक भट्टराई
८ पुस २०७३
चितवन । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सबै दलहरु मिलेर विकास निर्माणमा लाग्न सके बाह्य शक्तिको केही नलाग्ने बताउनुभएको छ ।
नयाँ शक्ति निकट महिला संगठन 'महिला शक्ति नेपाल' को प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई शुक्रबार चितवनमा सम्बोधन गर्दै संयोजक डा. भट्टराईले संविधान जारी गर्दा देखिएको दलहरुको बीचको एकता अहिले पनि आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले अहिलेको संशोधन विधेकलाई परिमार्जित गरेर सबै दलको रायअनुसार संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन विधेयक अपूरो रहेको उहाँको धारणा थियो । ‘यो अझै पनि अपुरो छ। एमालेसँग पनि अझै छलफल गरौं। आन्दोलनरत मधेसी, थारु र अन्य जातजातिको पनि माग पुरा हुने गरेर परिमार्जनसहितको शंसोधन प्रस्ताव लैजाऊँ’ उहाँको प्रस्ताव थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका संयोजक भट्टराईले संशोधन प्रस्ताव अपूरो रहेका कारण विभिन्न दल र बासिन्दाको विरोध आइरहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधनसँगै कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेताहरुले ‘बलजफती संविधान जारी गरेका कारण कार्यन्वयनमा समस्या आएको बताउनुहुँदै उहाँले संशोधन गर्ने बेलामा पनि कमजोरी नगर्न अपिल गर्नुभयो । ठूला दलहरुले दम्भ कायम राखे समस्या बढ्दै जाने उहाँको तर्क थियो ।
‘संविधान जारी गर्ने बेलामा हतार नगरौं तराई जलेको छ, उहाँहरुको मागलाई पनि सम्बोधन गरेर मात्रै संविधान जारी गरौं भन्दा ९० प्रतिशत मत छ भन्दै संविधान घोषणा गरेका कारण कार्यन्वयनमा लैजान समस्या भयो । अबको संशोधनले पनि समस्या समाधान हुँदैन त्यसैले परिमार्जन गरौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘हामी मिल्न नसकेका कारण छिमेकीले हस्तक्षेप गर्न थालेका छन्। मसानघाटमा पुगेका राजा पनि चल्न खोज्दैछन्। त्यसैले बेमेल र गतिरोध बढाएर फाइदा कसैलाई छैन। सबै मिलेर अगाडी बढौं। सबैको भावानालई समेटेर संविधान संसोधन गरौं’ नेता भट्टराईको आग्रह थियो ।
खुकुरीको भरमा लडेर देश जोगाएको इतिहास भएका नेपालीहरुमा मेलमिलाप बढे कुनै शक्तिले कमजोर बनाउन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । २००७ साल होस् वा त्यसपछिका क्रान्ति र आन्दोलन सबै दल मिलेका करण सफल भएको बताउँदै उहाँले मिलापमा जोड दिनुभयो ।
‘आज देश हाम्रै कारण कमजोर भएको हो। नेताहरु सबै मिलेर देश विकासमा लागे बल्ल हामी बलियो हुन्छौं। कुनै छिमेकीले हामीलाई कमजोर ठान्न सक्दैनन्। विश्वले हामीलाई मान्ने छन्। हाम्रो पासपोर्टको विश्वमा इज्जत हुने छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
संविधान कार्यान्वयनपछि मात्र राष्ट्र समृद्धि तर्फ लाग्ने बताउँदै उहाँले कार्यान्वयनका विषयमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि दलहरु नलागेका कारण नै मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्न थालेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले आफूहरुले निर्माण गरेको माओवादी पार्टीको मार्गचित्र गणतान्त्रिक नेपाल र संविधान जारी गर्नेसम्म मात्र रहेको उल्लेख गर्दै अब देशको विकासका लागि नयाँ सोच र नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो । नयाँ शक्ति आन्दोलनमुखी नभएर निर्माणमुखी राजनीतिमा लाग्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
शनिबारसम्म चल्ने सो भेलामा देश भरिका ५०० जना महिला प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको र भेलाले महिला शक्ति नेपालको भावी कार्यदिशा तय गर्ने संगठनकी संयोजक कल्पना धमलाले जानकारी दिनुभयो । भेलाले सम्मेलन आयोजक समिति गठन गर्ने उहाँको भनाइ छ।